Ny lahatsoratr'i Jamil Velji momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jamil Velji
Na dia fananana loharano fitarihana marimaritra iraisana aza dia zavatra lehibe amin'ny orinasam-pivarotana rehetra, tsy hitondra sakafo amin'ny lovia io. Ho sambatra kokoa ianao raha mifanaraka amin'ny tatitra Google Analytics manaitra anao ny valin'ny varotrao. Amin'ity tranga ity, farafahakeliny ampahany amin'ireo fitarihana ireo dia tokony havadika ho varotra sy mpanjifa. Ahoana raha mahazo fitarihana taonina ianao, nefa tsy misy varotra? Inona no tsy mety ataonao, ary inona no azonao atao